किन सिन्धुपाल्चोकवासीमा वर्षेनी प्राकृतिक विपत्ति आइरहन्छ ? « Etajakhabar
किन सिन्धुपाल्चोकवासीमा वर्षेनी प्राकृतिक विपत्ति आइरहन्छ ?
काठमाडौँ – विसं २०७२ को भूकम्पले थिलथिलो पारेको सिन्धुपाल्चोकमा वर्षेनी प्राकिृतक विपत्ति र दुर्घटनाले झन ठूलो पीडा थपिदिएको छ । प्रकृतिले दिएको विपत्तिले यहाँ ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । भूकम्प, बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिले नपुगेर अझै यहाँ सडक तथा हवाई दुर्घटनासमेत थपिने गरेकाले पछिल्ला केही वर्षमा विपत्ति नै सिन्धुपाल्चोकको नियति बन्न पुगेको छ ।
लिदीमा केही दिनअघि गएकाे पहिराेमा परेकाकाे खाेजतलास गरिँदै।
मेलम्चीमा पुरिएर आठ मजदुरको निधन
जिल्लाको मेलम्ची बजारमा साउन १८ गते आइतबार रातिको पहिरामा पुरिएर आठ मजदूरको निधन भएको थियो भने एक जनाको जिवितै उद्धार गरिएको थियो । अविरल वर्षाको कारण सडकमाथिबाट आएको पहिरामा परी कभर्ड हल बनाउन बसेका मजदूरहरुको निधन भएको थियो । निधन हुनेमा बारा तथा केही भारतीय नागरिक रहेको भन्दै प्रहरीले मृतककोे सनाखतपछि शव परिवारलाई बुझाएको थियो ।
घटनामा परेका तीन इञ्जिनीयरमध्ये एकको निधन भएको छ भने घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएका दुई उपचारत छन् । एक जना कर्मचारी अझै फेला परेका छैनन् । पानी पठाउन परीक्षणका क्रममा सुरुङको १७ नं गेट भत्किँदा भएको उक्त दुर्घटना छानबिन गर्न मन्त्रालयले सहसचिव रमाकान्त दुवाडीको संयोजकत्वमा प्राविधिकसहितको समितिसमेत गठन गरेको छ ।
जम्बु पहिरामा दुईको निधन २० बेपत्ता
सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका–१० गत असोज २४ गते बिहान बस दुर्घटना हुँदा १४ जनाको निधन भएको थियो । इन्द्रावती गाउँपालिकाको भोटसिपाबाट काठमाडौँका लागि छुटेको हेलम्बु यातायातको बा२ख २७१५ नंको बस दुर्घटना भएको हो । एकसय २० भन्दाबढी यात्रुले भरिएको बस झिल्के मोडको आरोलो बाटोमा दुर्घटनामा परेको थियो ।
यसैगरी गत वर्षको कात्तिक १७ गते सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे नजिकै सुनकोशी नदीमा बस दुर्घटना हुँदा १७ जनाको निधन भएको थियो । शैलुङ्गेश्वर यातायातको बा२ख ७२४५ नम्बरको यात्रुबाहक बस दोलखाको मागा देउरालीबाट काठमाडौँ आउँदै गर्दा सुकुटे नजिक दुर्घटना भएको थियो । चालकको लापरवाहीको कारण बस दुर्घना भएको निष्कर्ष प्रहरीको अनुसन्धानबाट निस्किएको थियो ।
सिन्धुपाल्चोकमा दुई ठूला हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा १२ जनाको ज्यान गएको थियो । जिल्लाको घोर्थली र यमुनाडाँडामा भएको दुर्घटनामा पाँच जना नेपालीसहित छ जना अमेरिकी र एक जना डच नागरिकको निधन भएको थियो ।